खड्कालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशको डा. केसीद्वारा विरोध
काठमाडौँ । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको माग राखेर अनसनरत डा. गोबिन्द केसीले सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशको विरोध गरेका छन् ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफ्ना मागहरुको सुनुवाई गर्नुको सट्टा झन् भ्रष्ट्राचारलाई संस्थागत गर्नेकाममा लागेको भन्दै डा. केसीले आफ्ना माग परिमार्जन गरेका छन् । डा. केसीले अब आफ्नो आन्दोलन न्यायलयलाई जवाफदेही बनाउने तर्फ पनि केन्द्रित हुने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफ्ना मागमा शिक्षा मन्त्रीले सिटीईभिटी मार्फत दर्जनौ कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिइरहेको भन्दै त्यसको विर्धो गर्दै सो सम्बन्धन फिर्ता लिन माग गरेका छन् । त्यस्तै डा. केसीले बर्खास्त गरिएका आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदच्युत गरेर कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
डा. केसीले न्यायालयको गरिमा जोगाउन र त्यसलाई भ्रष्ट्रहरुको अखडा बन्नबाट रोक्न आफुले जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारसँगको १० बुँदे सहमतिपछि डा.गोबिन्द केसीले अनशन तोडे
काठमाडौँ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने भएपछि चौधौ दिन डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार बिहान
सभामुखलाई सक्रिय भूमिका खेल्न डा.केसीको आग्रह
काठमाडौँ । अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीले संसद् प्रमुखको हैसियतले सभामुखलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । प्रा डा केसीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुखलाई संसद्को बाँकी
न्यायालयमा न्याय हरायो : डा गोबिन्द केसी
काठमाडौँ । प्रा डा गोविन्द केसीले न्यायपालिकामा न्याय हराएको बताएका छन् । सात दिनदेखि चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राखी शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा १३औँ पटकको आमरण अनशन बसिरहनुभएका केसीले न्यायपालिकाको मर्यादाका लागि
डा. गोबिन्द केसीको अनशन स्थगित
काठमाडौँ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारजगन्जका वरिष्ठ डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १२औं अनसन स्थगित गरेका छन् । पाँच बुँदे माग राखिएको सत्याग्रह कार्यक्रम सुरू भएको केही घण्टामा चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित